avril 2017 – filazantsaramada
FITIAVANA NO LEHIBE
Dia hoy Jesosy taminy: Mandehana hianao, ka manaova toy izany koa. Lioka 10:37b Rehefa nanontany an’i Jesosy ilay mpahay lalàna iray naka fanahy Azy hoe: inona no ataony handovany ny fiainana mandrakizay. Nanontany Jesosy ny amin’izay voasoratra ao amin’ny lalàna: Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra… Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Hoy Jesosy […]
Publié parfilazantsaramada avril 28, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FITIAVANA NO LEHIBE
Fandaharana isan-kerinandro amin’ny fampielezampeo Ao anatin’ny fankalazana ny Pasaka ny volana Aprily 2017 sy ny jobily faha 500 taonan’ny Reformasiona ary ny faha 150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) dia naompana tamin’ny lohahevitra hoe “Ny Reformasiona sy ny Filazantsara” ny fandaharana “Henoy ny feony” tamin’ity volana Aprily 2017 ity. Izany dia niresahana indrindra mahakasika ireo […]
Publié parfilazantsaramada avril 27, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur “Henoy ny feony”
« Izaho koa tsy manameloka anao; mandehana, ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony. » Jaona 8: 11b Rehefa misy lalàna dia misy ny fankatoavan-dalàna ary misy koa ny tsy fankatoavan-dalàna. Ilay olona eto amin’ity tantara eto ity dia azo nandika ny lalàn’I Mosesy, ary izao nentina teo amin’I Jesosy. Fariseo sy mpanora-dalàna no nahatratra ity […]
Publié parfilazantsaramada avril 21, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IZAHO KOA TSY MANAMELOKA ANAO
Amim-pitiavana sy amin’ny fanoloran-tena lehibe no hanompoan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo an’Andriamanitra. Mahatratra eo amin’ny 60 eo ho eo ireo mpiara-miasa an-tsitrapo FF avy eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Mankahery sy mamporisika azy ireo hatrany ireo mpiasa eo anivon’ny Foibe FF amin’ny hitohizan’ny fiaraha-miasa dia ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana […]
Publié parfilazantsaramada avril 20, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ireo mpiara-miasa an-tsitrapo amin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny fanoloran-tenany
« Ho tonga anie ny fanjakanao. » Matio 6:10a Ny fanoharana nataon’i Jesosy ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra dia tahaka ny voatsinampy, izay kely noho ny voa rehetra; raha voafafy kosa izy dia maniry ka lasa hazo lehibe ka azon’ny voro-manidina itoerana sy ialokalofana. Raha ny fanjakan’Andriamanitra dia efa eo aminy, fa ny fanjakan’Andriamanitra eo amintsika no manao ahoana? […]
Publié parfilazantsaramada avril 14, 2017 avril 12, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANJAKAN’ANDRIAMANITRA
“Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” Taorian’ny Fampiofanana “Fahaiza-mitarika sy Fifandraisana” izay notanterahin’ny Feon’ny Filazantsara tany amin’ny FLM Ambalavao Tsienimparihy ny 22, 23 Marsa 2017 dia roa tamin’ireo mpiofana niaraka tamin’ny Pastora Randianarivonirina Dieu Donné (Mpitondra Fileovana Ambalavao Tsienimparihy) no nizara ny Tenin’Andriamanitra sy ireo hevi-dehibe manan-danja novohizina nanditry ny Fampiofanana tamin’ny mponina any ambanivolon’ny Vohitsaoka. Tamim-pifaliana sy […]
Publié parfilazantsaramada avril 12, 2017 avril 11, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Tohin’ny Fampiofanana
NY HATAKY NY TOMPO:
« Hohamasinina anie ny anaranao. » Matio 6:9b Masina ny anaran’Andriamanitra, na manamasina Azy isika na tsy manamasina Azy. Fa amin’ny maha-zanany antsika dia tiany ho masina eo amintsika ny Anarany. Tsy masina eo amintsika anefa ny anaran’i Jehovah raha manao ratsy isika, ary izany no lazain’ny teny hoe: « Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran’ny […]
Publié parfilazantsaramada avril 7, 2017 avril 7, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY HATAKY NY TOMPO:
Fandaharan’asa ho an’ny Tanora
Andron’ny « Clubs », Lycée Nanisana Toy ny fanao isan-taona dia mankalaza ny andron’ny Club ireo Club miisa valo ao amin’ny Lycée Nanisana. Ny Talata 07 Febroary no nanatanterahin’ny Club Feon’ny Filazantsara izany izay naompana tamin’ny fampirantiana ireo sary marobe mampahafantatra ireo fandaharan’asa notanterahin’izy ireo nandritra ny taona maro. Nasaina ireo mpianatra mba hitsidika ny efin-trano fampirantiana. […]
Publié parfilazantsaramada avril 5, 2017 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fandaharan’asa ho an’ny Tanora